China Plastic Melting Point Analyzer ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang Instruments
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အရည်ပျော်မှတ်မီတာ > ပလတ်စတစ်အမှုန်အရည်ပျော်မှတ်မီတာ > ပလတ်စတစ်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်ခွဲစက်
JHX-5 Plus Plastic Melting Point Analyzerr သည်အသုံးပြုသူများအားတိကျ၊ တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစမ်းသပ်မှုရလဒ်များပေးရုံသာမကအသုံးပြုသူများအားထိရောက်အဆင်ပြေသောစမ်းသပ်မှုအတွေ့အကြုံများပေးစွမ်းသည်။ မရ။ optical မှန်ဘီလူးချဲ့နည်းပညာသည်နမူနာအရည်ပျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုလွယ်ကူရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်သည်။
The JHX-5 Plus ပလတ်စတစ်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်ခွဲစက်r combines high-precision temperature control technology and high-definition optical lens magnification technology, not only to provide users with accurate, stable and reliable test results, but also to provide users with efficient and convenient test experience. The optical lens magnification technology can easily and clearly see the whole process of sample melting.
1. ပလတ်စတစ်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်ခွဲစက် Introduction
1: hot stage method သည်ပလတ်စတစ်အမြောက်အများကိုစမ်းသပ်ရန်အဆင်ပြေသည်။
5: Dual-purpose capillary hot stage method ။
2. ပလတ်စတစ်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်ခွဲစက် Parameter
မော်ဒယ်: JHX-5 Plus
အပူချိန်အကွာအဝေး အခန်းအပူချိန် -400„ ƒ
ဖြေရှင်းချက် ၀.၁â„ ƒ
အပူနှုန်း ၀.၁ လက်မ
အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်း PID တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ မီးဖိုချောင်ကိုယ်ထည်ကိုအပြည့်အ ၀ ဖုံးအုပ်ထားသောဒီဇိုင်း
တိကျမှု ± ၀.၄â„ ƒ (<၂၅၀â„ ƒ)
ပြန်လုပ်နိုင်ခြင်း အရည်ပျော်မှတ်ထပ်ရနိုင်သော0.1â„ ƒ/Min ±0.3â„ ƒတွင်
ပြသမှုပုံစံ TFT high-definition မှန်အရောင်မျက်နှာပြင်
ဒေတာ interface ကို: RS232
သွေးကြောမျှင်ပြွန် အပြင်အချင်း† mm ၁.၆ မီလီမီတာ၊ အတွင်းအချင်းÏ† ၁.၂ မီလီမီတာ
The JHX-5 Plusပလတ်စတစ်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်ခွဲစက်has an important position in the chemical industry and medical research. It is an instrument for the production of food, drugs, spices, dyes and other organic crystal substances.
The ပလတ်စတစ်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်ခွဲစက် has its own heating system, which can ensureastable heating rate. The platinum temperature sensor has the advantages of fast response and high accuracy compared with the traditional method of using mercury thermometer.
မေး။ ။How many years have your company made ပလတ်စတစ်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်ခွဲစက်?
မေး။ ။Which certificate do you have for your products?
hot Tags:: ပလတ်စတစ်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်ခွဲစက်၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးပေါ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE